Love on the Rise (2020) | MM Movie Store
တောငျကာရိုလိုငျးနားပွညျနယျရဲ့ ပငျလယျကမျးစပျကမွို့ကလေးဟာသဘာဝရှုခငျးတှနေဲ့ သာယာလှပနပေါတယျအဲ့မွို့လေးမှာ ဗဈတိုးရီးယား(တိုရီ)ဆိုတဲ့မုနျ့ဖုတျသမလေးက သူ့လုပျငနျးကိုကွိုးစားလုပျကိုငျရငျး“ကိတျနတျသမီး” ဆိုပွီး နာမညျရစပွုလာတဲ့မိနျးမငယျလေးတဈယောကျပေါ့
တဈနတေ့ော့ မင်ျဂလာဆောငျတဈခုကို ကိတျမုနျ့သှားပို့တဲ့အခါဂြိတျ ဆိုတဲ့ကောငျလေးနဲ့ သှားဆုံပါလရေောဒါပမေယျ့ တိုရီဟာ ဂြိတျကို သူတို့မွို့က အထငျကရစီးပှားရေးလုပျငနျးရှငျရဲ့သားအနနေဲ့ မသိခဲ့ဘဲစားပှဲထိုးကောငျလေးအနနေဲ့ပဲ သိခဲ့ပါတယျကံဆိုးခငျြတော့ တိုရီတို့ငှားထားတဲ့ဆိုငျခနျးတှနေရောမှာကှနျဒိုအသဈတှဆေောကျဖို့အကွောငျးဖနျလာပါတယျ
ဒီကိစ်စကို တိုရီတို့ငှားရမျးသူတှကေ သိသှားပွီးကနျ့ကှကျကွောငျး ဆန်ဒပွကွတဲ့အခါ ဘာတှဆေကျဖွဈလာကွမလဲ?????ဂြိတျရဲ့ဘ၀မှနျကို သိသှားတဲ့အခါမှာ သူတို့နှဈယောကျ ဘာတှဆေကျဖွဈလာကွမလဲ?????
ဇာတျလမျးလေးက သမားရိုးကအြတိုငျးသှားပမေယျ့ပငျလယျကမျးစပျအလှတှေ စားခငျြစရာကိတျတှကေိုကွညျ့ရငျးအခဈြပုံပွငျလေးတဈပုဒျကို သီခငျြးမွူးမွူးလေးနဲ့ခံစားခငျြရငျတော့…..
တောင်ကာရိုလိုင်းနားပြည်နယ်ရဲ့ ပင်လယ်ကမ်းစပ်ကမြို့ကလေးဟာသဘာဝရှုခင်းတွေနဲ့ သာယာလှပနေပါတယ်အဲ့မြို့လေးမှာ ဗစ်တိုးရီးယား(တိုရီ)ဆိုတဲ့မုန့်ဖုတ်သမလေးက သူ့လုပ်ငန်းကိုကြိုးစားလုပ်ကိုင်ရင်း“ကိတ်နတ်သမီး” ဆိုပြီး နာမည်ရစပြုလာတဲ့မိန်းမငယ်လေးတစ်ယောက်ပေါ့
တစ်နေ့တော့ မင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုကို ကိတ်မုန့်သွားပို့တဲ့အခါဂျိတ် ဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ သွားဆုံပါလေရောဒါပေမယ့် တိုရီဟာ ဂျိတ်ကို သူတို့မြို့က အထင်ကရစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ရဲ့သားအနေနဲ့ မသိခဲ့ဘဲစားပွဲထိုးကောင်လေးအနေနဲ့ပဲ သိခဲ့ပါတယ်ကံဆိုးချင်တော့ တိုရီတို့ငှားထားတဲ့ဆိုင်ခန်းတွေနေရာမှာကွန်ဒိုအသစ်တွေဆောက်ဖို့အကြောင်းဖန်လာပါတယ်
ဒီကိစ္စကို တိုရီတို့ငှားရမ်းသူတွေက သိသွားပြီးကန့်ကွက်ကြောင်း ဆန္ဒပြကြတဲ့အခါ ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာကြမလဲ?????ဂျိတ်ရဲ့ဘ၀မှန်ကို သိသွားတဲ့အခါမှာ သူတို့နှစ်ယောက် ဘာတွေဆက်ဖြစ်လာကြမလဲ?????
ဇာတ်လမ်းလေးက သမားရိုးကျအတိုင်းသွားပေမယ့်ပင်လယ်ကမ်းစပ်အလှတွေ စားချင်စရာကိတ်တွေကိုကြည့်ရင်းအချစ်ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်ကို သီချင်းမြူးမြူးလေးနဲ့ခံစားချင်ရင်တော့…..